Nagu saabsan - Fuzhou Juan Juan Waxyaabaha Aan Ku Xidhnayn Co., Ltd.
SOO DHAWOOW JUANJUAN
Juan Juan waa kan ugu cusub adduunka ee tirtiraha qoyaanka iyo soo saaraha tuwaalada. Juan Juan. ayaa sii waday inuu isbeddelo tan iyo bilowgeena 2010. Hada xarunteedu tahay Fuzhou, Shiinaha, dhaxalkayaga iyo mustaqbalkeenuba waxay kuxiran yihiin hadafkeena si aan u noqono hormuudka bixiyeyaasha masaxaadda deegaanka ee xasaasiga ah ee aan ku xidhnayn dharka iyo tuwaalada suufka ah ee suuqyada. Maaddaama aan nahay bahwadaagta OEM ee magacyada ugu waaweyn adduunka, Waxaannu siineynaa khadad dhammaystiran oo ah Siddeed xariiq oo wax soo saar si buuxda otomaatig ah loogu nadiifiyo kiishka kiishka iyo khadka wax soo saarka buuxa ee dareeraha oo dhammaystiran oo loogu talagalay nooca xashiishka jeermiska lagu nadiifiyo iyo masaxaadda aalkolada oo leh dharbaaxo u gaar ah oo loo yaqaan 'HDPE qasacad iyo khadka wax soo saarka daboolka Wax soo saarka Maalinlaha waa 250,000 baakado / qasacado.
Warshadeenu waxay ku kalsoon yihiin hudheellada adduunka ugu waaweyn ee Shiinaha iyo tafaariiqleyda inay si isdaba joog ah u keenaan alaabada heerka koowaad oo ay ka mid yihiin masaxaadda carruurta, masaxyada la isku qurxiyo, cadka musqusha ee qoyan iyo mashiinnada guryaha lagu nadiifiyo, calallada, tuwaallada, iwm. tobankii sano ee la soo dhaafay, laakiin wali waxaan ku dhaqmaynaa isla ruuxii ganacsi iyo go'aan qaadasho si aan u helno dariiq wanaagsan oo loogu talagalay masaxa dhalaanka caag la'aanta ah ee baakadaha BPA-ga ee dib-u-cusbooneysiinta iyo masaxyada lagu dhaqi karo, iwm.
Juan Juan waa shirkad ganacsi oo xiiso leh, kuna naalooneysa koritaan weyn oo ay la socdaan in ka badan 200 oo dad tayo leh oo ka wada shaqeeya jardiinadeena warshadaha. Ganacsigeennu wuxuu ku dhisan yahay hal-abuur, soosaaridda fikradaha cusub ee soo-saarka ah ayaa ah waxa nagu sii wadi doona Qiimaynta "Ma tirtiri kartid dhibaatooyinka nolosha oo dhan, waxaad ku riyootaa inay suurtogal tahay"
I.Non Xiran Dharka
Masaxada jeermiska lagu dilo ee loo yaqaan 'Excellet' waxay ka timaadaa tayo sare oo dhar aan tolmo lahayn, dharkeena aan tolmo lahayn waxaa soo saaray shirkado caan ah oo la yiraahdo A.Celli Group.
Taariikhda kooxda A.Celli waxay bilaabmaysaa dhamaadka Dagaalki Labaad ee Aduunka, sanadkii 1945. Horraantii 1980-yadii, qoyska Celli waxay ogaadeen suurtagalnimada in lagu dabaqo tikniyoolajiyad aad u horumarsan, sida tikniyoolajiyadda waraaqaha, goob soo ifbaxaysa oo xiiso leh sida Warshadaha nonwovens waxay had iyo jeer isticmaali jireen dabaylaha iyo kala-goysyada dib-u-celinta ee warshadaha dharka, kuwaas oo badanaa lagu yaqaan inay yihiin kuwo gaabis ah oo aan si gaar ah u adkeyn.
Thanks to dareenka Piero iyo Marco Celli, iyada oo loo marayo soo bandhigida dabayl adag, la isku halleyn karo oo xawaare sare leh, shirkaddu waxay la kulmeysaa guul deg deg ah oo soosaarayaasha ugu waaweyn ee Talyaanigu ay noqdaan macaamiishooda. Pantex, Tenotex, Fiberweb waa qaar ka mid ah soo saarayaasha ka faa'iideysta tiknoolajiyada cusub ee A.Celli si loo wanaajiyo khadadka 'waxtarkooda iyo waxsoosaarkooda. A.Celli Wuxuu ku takhasusay fuulitaanka, kala-goynta, duubista iyo duubista. Badeecada kaladuwan waxaa ka mid ah nidaamyada mindiyo si otomaatig ah u goynaysa, goos goos goos goos ah otomaatig iyo nidaamyada maaraynta usheeda dhexe, iyo khadad isku dhafan oo leh awood daabacan. A.Celli Nonwovens waxay bixisaa noocyo kaladuwan oo mashiinada duubista iyo kala-goysyada leh oo ay kujiraan xalal casri ah oo loogu talagalay isbiirsada, xoqan, kabbashada iyo airwo-nonwovens waxsoosaarka alaabada iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo dharka fudud iyo soosaarka xawaaraha sare.
II. Qoyaanka Mashiinada
In ka badan 10 sano, waxaan adeegsanay 5 nooc oo mashiinada masaxa qoyan ah, Practice waa macalinka ugufiican, sidaa darteed waxaan sare uqaadeynaa oo aan hagaajineynaa qadka soo saarista mashiinka qoyan oo ay weheliyaan kuwa ugu weyn ee qalabka keena mudo 10 sano ah Maalmahan tayada tirtirkeena qoyan (oo ay ku jiraan masaxda kiishka iyo hal mar tirtiraha qoyan) inta badan waa kuwa xasilloon oo laga qirsan yahay suuqa. Haatan waxaan u leenahay sideed xarig wax soo saar oo loogu talagalay masaxa wax soo saarka maalinlaha ah ee 200,000 baakado / duub.
III Nooca sunta ah ee jeermiska lagu nadiifiyo (masaxda aalkolada)
Sida lammaane oem xirfadle ee magacyada caanka ah ee adduunka, waxaannu leenahay mashiinka wax taaj oo kale oo dharbaaxo leh oo sameeya mashiinka HDPE iyo mashiinka wax lagu duro si loo sameeyo daboolka PP, Waxsoosaarkeena maalinlaha ah waa 200,000 qasacad / dabool xilligan.
Kaliya maahan calaamadeynta gaarka loo leeyahay, laakiin sidoo kale naqshada habeysan ee haanta ayaa sidoo kale lagu soo dhaweyn doonaa astaamahaaga.
IV Mashiinka buuxinta dareeraha otomaatiga ah ee masaxa qasacadaha.
Wax soo saarkeenu waa 24000 qasacadood saacad kasta saxnaantoodu tahay 0.1%.
Adiga oo isticmaalaya mashiinka buuxinta otomaatiga, amarka weyn ee mashiinka jeermiska lagu nadiifiyo ayaa lagu fulin karaa waqtiga loogu talagalay.
Kama Masaxi Karto Dhamaan Dhibaatooyinka Nolosha, Kaliya Ku Riyoow Suuragal!